မုန်းတီးမှုကိုကျော်လွှားခြင်း - Zirignon Grobli - Afrikhepri Fondation
-CANSIM Zirignon Grobli ၏ Shroud
Lချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်သေဆုံးခြင်းနှင့်လွတ်သွားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပျက်ခြင်းသို့ကျရောက်နိုင်သည့်အန္တရာယ်ကိုကြုံတွေ့ရသည်။ မုန်းတီးမှုသည်သာနိမ့်ကျသောစွန်းတွင်ဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်သည်။ အမုန်းတရားသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖျားနာခြင်းနှင့်အတူရှိခြင်း၏နောက်ဆုံးကာကွယ်ရေးတုံ့ပြန်မှုဖြစ်သည်။
မုန်းတီးမှုသည်“ မင်းကိုငါ့ကိုမချစ်တဲ့အတွက်မင်းကိုသေချင်နေပြီ” ဟူသောအကူအညီမဲ့မှု၏ပြင်းထန်မှုကထောက်ခံသည်။ ထို့ကြောင့်မုန်းတီးမှုသည်ချစ်မြတ်နိုးသူအားလတ်တလောတည်ရှိမှုမရှိသောအရာဝတ္ထုနှင့်ချိတ်ဆက်ပေးသော hallucinatory အနှစ်သာရ၏နောက်ဆုံးဆက်သွယ်မှုဖြစ်သည်။ မုန်းတီးမှုကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသည့်ကြားမှ "ဖတ်ရန်" လိုသည်။ အချစ်၏ထင်ယောင်ထင်မှားများကိုပျောက်ဆုံးနေသောသူ (ရှင်သန်ရခြင်း၏အကြောင်းပြချက်) သည်သူ၏စိတ်ကူးယဉ် "တစ်ဝက်" ကိုဖျက်ဆီးရန်သူ၏အစွမ်းသတ္တိရှိသမျှနှင့်အတူရည်စူးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
စိတ်ပျက်ခြင်းအစားအမုန်းတရားပေါ်ပေါက်လာသည်။ ဒါကမုန်းတီးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်စပ်မှုကို Sadomasochism ရဲ့မှတ်ပုံတင်စာရင်းထဲမှာမှတ်ပုံတင်စေတယ်။ သူကဘယ်သူ့ကိုဘယ်သူအရေးယူတယ်၊ ဘယ်သူကဆင်းရဲဒုက္ခခံစားနေတယ်ဆိုတာကိုပိုင်းခြားသိမြင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အမှန်မှာနတ်ဆိုးသည်နတ်ဆိုးစွဲသူနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ တစ် ဦး က Self- ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု, အမုန်းတရား၏ဆက်ဆံရေး။ ပြေလည်မှုရစေသောဖခင်မရှိခြင်းအတွက်ပုံဆောင်ဖွဲ့စည်းပုံမှအကျိုးအမြတ်မရရှိခဲ့သော“ ဆင်းရဲဒုက္ခ” တွင်ရှိနေခြင်း။
အဆိုပါ sadomasochist ၏မောင်းနှင်အားကိုမုန်းတီးခြင်းအားနောက်ဆုံး၌စိတ်ပျက်အားလျော့သူချစ်သူသည်သေခြင်း၌အရာဝတ္ထုနှင့်သဟဇာတဖြစ်မှုကိုတွေ့ရှိသည့် Melancholie အခြေအနေကိုဆန့်ကျင်သောတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ အမှန်စင်စစ်မုန်းတီးမှုသည်လူသားတစ် ဦး အားမူလချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏အရာအဖြစ်အမှုဆောင်ရန်ပုံဆောင်မိခင်ကိုမဆုံးရှုံးခြင်းသည်သေခြင်းတရားကိုငြင်းပယ်။ သူ၏သေခြင်းဆိုင်ရာဗီဇများကိုအင်အားကြီးမားသောမိခင်ကိုရည်မှန်း။ သွန်းလောင်းပေးသောဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုသုတ်သင်ရှင်းလင်းပြီးမှော်အတတ်ဖြင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုအစားထိုးလိုက်ပါ။
က Melancholie ၏ပြည်နယ်အတွက်ကမ္ဘာနှင့်အတိမ်းစောင်းဖို့လူတချည်နှောင်သောနောက်ဆုံး link ကိုဖြတ်သည်အဆိုးဆုံးရက်စက်မှုအတွင်းမုန်းတီးမှုနှင့်အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့တံဆိပ်။
ဒါဟာမိဘမရှိသောကမ္ဘာကြီး sadomasochistic ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာသူတို့ရဲ့ဝယ်လိုအားတစ်ကျေနပ်ဖြေကိုရှာမတှေ့မုန်းတီးမှုခံရမှုသတ္တဝါနှင့်ပြည့်စုံသည်။ ကမ်ဘာပျေါတှငျရောဂါဘာသာတရားတစ်ခုအရာဝတ္ထု၏ Sub-ကျင်းပနိုင်ရန်အသုံးပြုပုံမုန်းတီးမှုနထေိုငျဖို့အပူတပြင်းအလိုဆန္ဒထင်ဟပ်စေတဲ့စိတ်ပညာဇီဝကမ္မအတှေ့အကွုံကြောင်းလျစ်လျူရှု, အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေမအောင်မြင်ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာရောဂါဖြစ်ပါသည် ဤလောကတှငျမတ်ေတာသ
ဘာသာတရားများကဤသို့အငြင်းပွားမှုများဖြစ်ပေါ်လာသည်နှင့်အမျှအမုန်းတရားပြtheနာအားအချစ်၏ပစ္စည်းဆုံးရှုံးခြင်း၏ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောထုတ်ကုန်ဖြစ်သည့်နောက်ထပ် ဦး တည်ချက်တစ်ခုကိုရှာဖွေရန်အကြံပြုလိုပါသည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့စိတ်ပညာကုထုံးကိုကြိုးစားကြည့်ပါက၊ psychoanalysis ထံမှသူတော်ကောင်းတရား၏ heuristic တန်ဖိုးကိုသင်ယူ? ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုစွန့်လွှတ်ခြင်း (၎င်းကိုဖိနှိပ်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်) အားဖြင့်သေစေနိုင်သောစိတ်အားထက်သန်မှုကိုကုသခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်အခြေခံကျသောလှုံ့ဆော်မှုများကို အခြေခံ၍ ၎င်း၏ဆိုးကျိုးများကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံး၏စိတ်ဝင်စားမှုသည်ဥပစာစကားသို့သွားခြင်းအားဖြင့်လူတစ် ဦး ၏ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောအမေနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုကိုအခွင့်အလမ်းကမ်းလှမ်းရန်ဖြစ်သည်။ ငါတို့ဒီနေရာကိုကိုယ့်ဘာသာကိုယ်မြေဆီလွှာဖို့၊ တိုက်ခိုက်ဖို့၊ တိုက်ခိုက်ဖို့၊ ပြိုဖို့၊ ဆုတ်ဖို့၊ ရအောင်လုပ်ဖို့၊ စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့အရောင်အားလုံးကိုကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုနိုင်တယ်။ ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်, တိုင်ကြားခြင်းမရှိဘဲ!
ထိုအထောက်ခံမှု၏ကန့်သတ်အတွင်းကျသောဤသင်္ကေတအဖျက်လှုပ်ရှားမှု, အဆုံးမရှိတာဝန်ပေးအပ်တစ်ခုရှိပါတယ်။ အကယ်၍ လိုအပ်ပါကကတ်ထူပြားများ ၀ တ်သည်အထိသတိလစ်မေ့မြောနေသဖြင့်စိတ်ကူးယဉ်ခန်းများပျောက်ကွယ်သွားပြီးလူနာသည်သူထိုင်နေခြင်းဖြစ်သည်ကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ ထို့နောက်သူသည်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံခြင်းအတွက်အဆင်ပြေသောစိတ်ထားထဲသို့ဝင်သည်။
နှုတ်ကပတ်တော်လူနာအားဖြင့်စည်ပင်တင်စားထားတဲ့အဖျက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ဦးအစားထိုးရေးခြစ်ရန်စအိုမိခင်, အမည်းစက်များဆောင်လုလင်နှင့် e-မဲ-ger မှဟူ.သာသူကိုတညျဆောကျလူနာများ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်ကြောင်းအဓိပ္ပါယ်ရှိသောဆိုင်းဘုတ်များပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် culminates ကျောက်။ အဆိုပါလေယာဉ်တင်သင်္ဘောကိုခံရသမ်မာကမျြး (ဖန်ဆင်းရှင်နိယာမ) ပိုး shaping ပစ္စည်းများ၏ညီမျှသည်။ လူ့ဖန်တီးမှု function ကိုသူတွက်ချက်ရေးခြစ်ရန်ကနေပျေါပေါကျကြောင်းသန္ဓေသားပုံစံများကို recover နှင့် preverbal ပုံစံများ (ဘာသာစကား၏မဲဆန္ဒနယ်ဒြပ်စင်) ကိုရန်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါသင်္ကေတအမိန့်ထဲသို့ entry ကိုမုန်းတီးမှုနှင့်အရာဝတ္ထုဆက်ဆံရေးအတွက်တစ်ဦးရင်ခုန်စရာကြားဆက်ဆံရေး gratify ကျုံ့နိုင်စွမ်း၏စိတ်ကူးယဉ်အတွေ့အကြုံကို၌မိုဃ်းပွင့တူသောပျောက်ကွယ်သွား၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
ထို့ကြောင့်သင်္ကေတဖွဲ့စည်းပုံသည်မုန်းတီးမှု၏အဆိပ်ဖြစ်မှုကိုအားပျော့စေသည့်ကုစားနည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအင်အားကြီးမားသောမိခင်များကိုဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားသောဤ“ မွေးကင်းစကလေးငယ်ရောဂါ” ဖြစ်သည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်“ ပျော်ရွှင်မှု” နှင့်“ အမြတ်အများဆုံးအမြတ်” တို့၏အစွမ်းထက်မှုဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကိုမုန်းတီးမှုသည်“ ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးမျှဝေခြင်း” ဖြစ်သည်ဟုပြောလိမ့်မည်။
စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Selma (2014)
Thot l'Atlante (မြ) မြမြစားပွဲများ
စကြဝofာ၏မှော်အတတ် - မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် (၂၀၁၂)
လျှို့ဝှက်အရောင်များ - မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် (၂၀၁၁-၂၀၁၆)